Sarkaal caana oo ku geeriyooday shil ka dhacay Sh/dhexe!! – War La Helaa Talo La Helaa
By madoobe	 Last updated Sep 14, 2018
Wararka naga soo gaaraya gobolka Shabeellaha dhexe ayaa waxa ay sheegayaan in gelinkii dambe ee Maanta shil gaari oo ka dhacay deegaano hoostaga degmada Mahadaay uu ku geeriyooday Sarkaal ka tirsanaa Ciidamada Dowladda Soomaaliya.
Sarkaalka geeriyooday oo lagu Magacaabi jiray Muqtaar Cali Xuseen ayaa waxaa uu shil ku galay gaarigiisa inta u dhaxeysa degmada Mahadaay iyo deegaanka buurane,sida u xaqeejiyay Gaashaanle sare Cumar Cali Cadow.
Waxa uu sheegay in Muqtaar Cali Xuseen ee shilka gaari ku geeriyooday uu ahaa Taliyaha horin ka tirsan Guutada labaad ee Ciidamada xoogga dalka Soomaaliya,isla markaana shilkaasi uu dhaawac culus ka soo gaaray mid ka mid ah ilaaladiisa.
Xafiiska Muqdisho Somalia
Shabaab oo sheegtay inay dileen sarkaal ka tirsanaa Millatariga!